တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၆
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်နှင့် ပူးတွဲစစ်ဦးစီးဌာန စစ်ဦးစီးချုပ် Gen. Li Zuocheng ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီးရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရှန်ကျန်းမြို့ရှိ ပေါင်အမ်းလေဆိပ်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား တောင်ပိုင်းစစ်နယ်ဝန်း ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်၊ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် Maj. Gen. Cheng Daoxiang နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးသစ်လင်းအုန်း၊ မြန်မာစစ်သံ (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် တင့်ဆန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ညနေပိုင်းတွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိရာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်သက်ပုံနှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong liang နှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်လိုက်ပါသွားသည့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ ပြန်လည်လိုက်ပါလာခဲ့ကြသည်။
နပွေညျတျော၊ နိုဝငျဘာ ၂၆
တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ ဗဟိုစဈကျောမရှငျအဖှဲ့ဝငျနှငျ့ ပူးတှဲစဈဦးစီးဌာန စဈဦးစီးခြုပျ Gen. Li Zuocheng ၏ ဖိတျကွားခကျြအရ တရုတျနိုငျငံသို့ ခဈြကွညျရေး ခရီးရောကျရှိနသေညျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသော မွနျမာ့တပျမတျော ခဈြကွညျရေးကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ ရှနျကနျြးမွို့ရှိ ပေါငျအမျးလဆေိပျမှ ပွနျလညျထှကျခှာကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားအား တောငျပိုငျးစဈနယျဝနျး ကှပျကဲမှုဌာနခြုပျ၊ ဒုတိယစဈဦးစီးခြုပျ Maj. Gen. Cheng Daoxiang နှငျ့ တရုတျပွညျသူ့ လှတျမွောကျရေးတပျမတျော အရာရှိကွီးမြား၊ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာနိုငျငံသံအမတျကွီး ဦးသဈလငျးအုနျး၊ မွနျမာစဈသံ (ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျမှူးခြုပျ တငျ့ဆနျးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားက လဆေိပျတှငျ ပို့ဆောငျနှုတျဆကျကွသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ညနပေိုငျးတှငျ ရနျကုနျအပွညျပွညျဆိုငျရာ လဆေိပျသို့ ပွနျလညျရောကျရှိရာ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး) မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး သိနျးဌေး၊ ရနျကုနျတိုငျးစဈဌာနခြုပျ တိုငျးမှူး ဗိုလျခြုပျသကျပုံနှငျ့ တပျမတျော အရာရှိကွီးမြား၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Hong liang နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားက လဆေိပျတှငျ ကွိုဆိုနှုတျဆကျကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ အဖှဲ့ဝငျမြားအဖွဈလိုကျပါသှားသညျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား ပွနျလညျလိုကျပါလာခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရှန်ကျန်းမြို့ရှိ Shenzhen Lotus Hill Park နှင့် Shenzhen Museum သို့သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်နှင့်တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်နှင့် ပူးတွဲစစ်ဦးစီးဌာန စစ်ဦးစီးချုပ် Gen. Li Zuocheng ကဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၇ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ၀ီသတိမကြိမ် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်လုံးဆိုင်ရာ ရွှေကျင်နိကာယ သံဃာ့အစည်းအဝေးကြီး တက်ရောက်လျက်ရှိသည့် ဆရာတော်ကြီးများအား ဖူးမြော်ကြည်ညို၍ လှူဖွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများနှင့် နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း
ဇန်နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၈ Admin 0